Momba ny filomanosana amin'ny famoizana lanja | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra
Ny filomanosana dia mety amin'ny fampihetseham-batana. Noho ny filomanosana dia azonao atao ny manatsara ny tsimatimanota, mampiadana ny fizotran'ny fahanterana ary manatsara ny feon'ny vatana iray manontolo. Ny endrika ara-batana tena tsara, ny hozatra tononkalo, ny toe-po tsara ary ny fipoahan'ny angovo dia lisitra kely misy lafin-javatra tsara ihany.
Tsy azo lavina ny tombony azo avy amin'ny milomano. Mora sy mahafinaritra ny mamoy lanja amin'ny fanatsarana ny fahasalamana amin'ny ankapobeny.
Zava-misy mahaliana momba ny lomano
Na mandry ambony rano fotsiny aza ny olona iray, dia mety hihena. Ny filomanosana mavitrika kosa dia tsy mandoro kaloria fotsiny fa manampy amin'ny fanamafisana ny hozatra. Izany no antony tokony hampidirana ny lomano ao amin'ny lalam-piofanana fampiofanana anao.
Rehefa milomano dia mihombo haingana be ny metabolism. Ary ny fanafainganana ny metabolism, araka ny fantatsika, dia mandray anjara amin'ny fihenan'ny lanja.
Tsy toy ny fiofanana amin'ny gym, raha milomano isika, dia tsy hahazo mamelatra sy hozatra be loatra.
Rehefa milomano isika, ny vatantsika dia mampiasa hozatra izay tena sarotra ny miasa amin'ny fomba hafa.
Mora kokoa ny manao fanatanjahantena anaty rano noho ny eny an-tanety. Noho izany dia tsy hahatsapa enta-mavesatra isika mandritra izany lomano... Ary hozatra mavesatra sy mandaitra tokoa ireo hozatra.
Ny lomano dia mandaitra tokoa amin'ny ady amin'ny "peel orange". Amin'ny alàlan'ny filomanosana dia resintsika ny fanoherana ny rano. Noho izany, manatsara ny fikorianan'ny rà isika ary tsy manome tavy matavy hanana fotoana tokana hapetraka amin'ny endrika cellulite tsy ilaina.
Ny filomanosana dia manatsara ny fihodinan'ny hoditra. Manjary elastika kokoa, matevina kokoa, malama kokoa izy io. Aorian'ny fitsidihanao ny pisinina dia mety ho tsapanao fa nanatrika fanorana izahay.
Ny fanatanjahan-tena dia manamafy ny rafi-kardia, manatsara ny tosidra, mampitombo ny haavon'ny hemôglôbinin ao anaty rà, ary manamafy ny hery fiarovan'ny vatana.
Ahoana ny fomba nilomano mba hahazoana lanja?
Raha mbola tsy nitsidika ny pisinina ianao dia tsara kokoa ny manomboka miandalana. Toy ny spaoro hafa rehetra io. Ny fitomboana mahery vaika amin'ny fampihetseham-batana dia tsy ilaina amin'ny vatana.
Amin'ny voalohany dia afaka milomano mandritra ny 30 minitra ianao, tsy dia mahery vaika ary tsy lavitra. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia azonao atao ny mitondra ny fotoana an-tsambo mandritra ny adiny iray.
Aleo milomano maraina na hariva
Amin'ny maraina, ny vatantsika dia milamina ary mora tohina amin'ny fihenjanana. Ary manome toky antsika fa hampisondrotra angovo mandritra ny tontolo andro. Ary amin'ny hariva dia hodorantsika ny kaloria azo mandritra ny andro. Ity vokatra ity dia azo hamafisina amin'ny sakafo mahavelona aorian'ny fiofanana. Saingy eto dia miankina amin'ny olona tsirairay ny zava-drehetra, koa henoy ny vatanao ary araho ny torolalana omeny.
Koa satria mihena be ny lanjan'ny vatan'olombelona amin'ny rano, dia mety tsara ho an'ny olona matavy loatra ny milomano. Ary koa, ny filomanosana dia mety na dia ho an'ireo izay voadona amin'ny hetsika ara-batana lehibe aza. Rehefa dinihina tokoa, dia afaka maheno matetika ianao fa noraran'ny dokotera ny olona hanao karazana fanatanjahan-tena noho ny olana amin'ny tonon-taolana na amin'ny lamosina. Ny lomano no vahaolana amin'ny olana.
Inona no tokony ho fampihetseham-pianaranao?
Ny filomanosana dia tokony hatao tsy tapaka. Toy ny amin'ny fanatanjahan-tena hafa, fampihetseham-batana 3-4 isan-kerinandro dia tsara indrindra. Ny faharetan'ny milomano dia azo ampitomboina tsikelikely hatramin'ny adiny iray. Saingy ny tombony amin'ny filomanosana amin'ny fihenan'ny lanja dia tsy hisy raha tsy ny hazakazaka atao amin'ny haingam-pandeha. Raha mandry eo ambonin'ny rano mandritra ny adiny iray fotsiny ianao dia ho kely ny vokany.
Ny fanamafisana ankapobeny ny fahombiazan'ny vatana dia hitranga. Fa mba hialana amin'ny tavy amin'ny vatana dia mbola mila manandrana ihany ianao. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny manaraka ity paikady manaraka ity: fampiofanana mahery 70%, fitsaharana 30% ary fanarenana.
Ny lolo, ny tratra ary ny mandady dia heverina ho fomba filomanosana mahomby. Tsara ny milomano eo an-tratranao, mitazona fanohanana eo alohanao. Izany dia hanampy antsika hanenjana ny hozatry ny sandry sy ny tongotra, hanamafy ny abs, hampiasa ny sisiny ary "hanitsy" fihetsika. Eny, ny filomanosana koa dia misy fiatraikany tsara amin'ny hazondamosina. Noho izany, ireo izay te hanamboatra azy dia tokony hitsidika ny pisinina.
Aza hadino ny manafana ny tany alohan'ny fampiofanana. Omeo 5-10 minitra fotsiny ity dingana ity, dia hitombo be ny fahombiazan'ny fiofanana. Azonao atao ny manofa mpampiofana iray izay hamorona programa fanofanana izay mety indrindra aminao. Ary hanara-maso ihany koa ny fahamarinan'ny teknika natolotra izy.
Hanoro hevitra anao ny mpanazatra ny amin'ny fomba milomano mba hisy fiantraikany amin'ny faritra misy ny olana. Ny hamafin'ny fampihetseham-batana koa dia tena zava-dehibe. Arakaraky ny hamindrana ao anaty rano no hampihena ny lanjanao. Ary ny maha-zava-dehibe ny sakafo ara-dalàna dia tsy azo lavina amin'ny ankapobeny.
Ny fampifangaroana izany rehetra izany dia hahatratra valiny mahatalanjona ao anatin'ny fotoana fohy. Milomano amin'ny fahafinaretana ary mampihena ny lanja!
Fanatanjahan-tena ho an'ny abs sy ny fehim-bava: ny fomba hahomby amin'ny fahombiazana
Ny superset dia fanazaran-tena ho an'ny vatana iray manontolo. Fanatanjahan-tena mandoro tavy ao an-trano
Manala ny kibo. Ahoana no hahatratrarana kibo fisaka?
Ny teknika mahomby indrindra - lomano lolo
Prev Sakafo Breziliana - mora very lanja
Manaraka Cocktail miaraka amin'ny jirofo
81 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,787.